Maindasitiri Kukanda Vagadziri & Vatengesi - China Industrial Kukanda Fekitori
Kanda aruminiyamu kugokora
Iyo yakachena aruminiyamu kana aluminium alloy ingot inogadzirirwa zvinoenderana neyakaenzana maumbirwo reshiyo, mushure mekunyepedzera kupisa mualuminium alloy emvura kana yakanyungudutswa nyika uyezve kuburikidza nehunyanzvi muforoma kana inoenderana maitiro ealuminium emvura kana yakanyungudutswa aluminium alloy inodira mukati mevhu, mushure mekutonhora kugadzira chimiro chinodiwa chealuminium zvikamu.
Iyo aruminiyamu inoshandiswa mukukanda aruminiyamu inonzi: cast aluminium alloy.Common nzira dzealuminium kukanda ndeiyi: jecha kukanda, kufa kufa kukanda, pasi kumanikidzwa kukanda, kunyatso kurasa, zvachose chiganda kukanda zvichingodaro.
Kanda aruminiyamu flange ruoko
Kanda aruminiyamu inowanikwa
Kanda aluminium pamusoro
Kanda aruminiyamu redhiyeta
Kanda simbi conical giya
Simbi yakakandwa chiumbwa chinosanganisira kunyanya simbi, kabhoni, uye nesilicon.
Mune maalloys aya, iyo kabhoni yezvinhu inodarika iyo huwandu hunogona kuchengetwa muaustenite solid solution paeutectic tembiricha.
Simbi yakakanda iine iron-kabhoni chiwanikwa chine kabhoni zvemukati zvinopfuura 2.11% (kazhinji 2.5 ~ 4%) .Ichinhu chakawanda-chiumbwa chiine simbi, kabhoni nesilicon sechinhu chikuru chezvinhu uye chine mamwe manganese, sarufa, phosphorus. uye zvimwe zvisina kuchena kupfuura kabhoni simbi.Sekumwe kugadzirisa mamenicha ehupfumi hwesimbi kana epanyama, makemikari zvivakwa, asi zvakare wedzera imwe huwandu hwesimbi yezvinhu, chiwanikwa simbi.
Pakutanga kwezana ramakore rechitanhatu BC, China yakatanga kushandisa simbi, kupfuura nyika dzeEuropean makore anoda kusvika zviuru zviviri zvisati zvaitika.Cast iron ichiri chimwe chezvinhu zvakakosha mukugadzirwa kwemaindasitiri.
Zvinoenderana nechimiro chekabhoni iripo musimbi yakakandwa, simbi yakakandwa inogona kukamurwa kuita
1.White simbi yakakandwa kunze kweavo vashoma vanonyungudika mu ferrite, iyo yakasara kabhoni iri muchimiro che cementite iripo mune yakakanda simbi, kuputsika kwayo kuri sirivheri-chena, inonzi chena cast iron. White iron cast iron inonyanya kushandiswa senge mbishi zvinhu. yekugadzira simbi uye isina chinhu yekugadzira nyore kufurirwa simbi.
2.Grey cast iron simbi kabhoni yese kana yakawanda yeiyo flake graphite inowanikwa mune yakakanda simbi, kuputsika kwayo kwakasviba grey, inonzi grey cast iron.
Chikamu che kabhoni ye hemp cast iron inowanikwa muchimiro che graphite, iyo yakafanana ne grey cast iron.Seimwe chikamu chiri muchimiro chemahara cementite yakafanana nechena cast iron. Mhando iyi yesimbi ine zvakare kuomarara uye brittleness, saka haiwanzoshandiswa muindasitiri.
mbiriKusiyana neakasiyana graphite morphology musimbi yakakanda, simbi yakakandwa inogona kukamurwa kuita
1.I graphite yegrey cast iron ndeye flake.
2.I graphite iri nyore nyore kukanda simbi iri flocculent.It inowanikwa kubva kune chena kukanda simbi mushure annealing pakakwirira tembiricha kwenguva yakareba. Its zvemagetsi zvivakwa (kunyanya kuomarara uye plasticity) zvakakwirira kupfuura grey kukanda simbi, saka inowanzo danwa nyore kufurirwa kukandira simbi.
Iyo graphite iri nodular yakakanda simbi idenderedzwa.Iyo inowanikwa ne spheroidizing kurapwa usati wadira yakanyungudutswa iron.This mhando yesimbi yakakanda haina chete ine yakakwira michina zvivakwa kupfuura grey kukanda simbi uye nyore kufonyerwa simbi simbi, asi zvakare ine yakapusa yekugadzira maitiro kupfuura nyore kufurirwa kukandira simbi. Zvakare, ayo mechimiro zvivakwa zvinogona kuwedzerwazve kuburikidza nekupisa kurapwa, saka iri kuwedzera zvakanyanya kushandiswa mukugadzira.
Kanda simbi yakavharwa jecha goko
Kanda simbi ndiro
Kanda simbi simbi
123456 Inotevera> >> Peji 1/18